Mpanelanelan’ny Sadc, Chissano : « Misy olana sarotra ilana fitandremana eto » (NewsMada) | AEMW
Mpanelanelan’ny Sadc, Chissano : « Misy olana sarotra ilana fitandremana eto » (NewsMada)
Tsy nisalasala ny iraky ny Sadc i Joaquim Chissano nilaza ny fahitany ny toe-draharaha eto amintsika taorian’ny herinandro nandalovany teo. Nametraka ny ahiahiny izy nefa koa mahita fa misy ihany ny tsirim-panantenana, na teo aza ny tranga niseho, omaly.
« Miaiky izahay fa tena misy olana mifandrirotra eto ary tokony hitandrina ihany », hoy izy mialohan’ny hiverenany hanaovany tatitra amin’ny Sadc, tetsy Antaninarenina, omaly. Naka ny hevitry ny mpitondra, toy ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ny tenany. Teo koa ireo filoha teo aloha sy ny mpandraharaha. Nanampy izany ny fihaonany amin’ny FFM sy ny FFKM ary ny avy amin’ny mpanohitra : Armada, ahitana ny Malagasy miara-miainga, ny Mapar ary ny Hiaraka isika sy ny Maitso hasin’i Madagasikara. « Hita taratra araka ny fahitanay azy fa te hiaina sy hiasa am-pilaminana ny Malagasy, ho amin’ny fampihavanana. Efa manomboka mirona amin’ny fijerena marimaritra iraisana ny toe-draharaha », hoy ny fanehoan-keviny diplaomatika.
Aleo hialana lavitra ny fifandonana
Natsidiny koa anefa ny ahiahiny fa vao mainka ho sarotra ny raharaha manoloana ireo fitakiana samihafa, toy ny tokony hialan’ny filoham-pirenena sy ireo hetsika fanoherana samihafa. « Mbola handany fotoana betsaka indray ny fikarakarana fifidianana raha mametra-pialana ny filoha ary hiteraka krizy indray izany. Manoloana izany, tokony homena vahana ny fifampiresahana ary tokony hirosoana ny fampihavanam-pirenena. Aleo hialana lavitra ny fifandonana », hoy ihany izy.
Tsiahivina fa anisan’ny anton-dian’i Chissano teto koa ny fanarahana akaiky ny fampiharana ny sori-dalana ary nilazany fa tsy mbola tanteraka amin’ny antsipiriany izany.
Andrasana ny aorian’izao diany teto amintsika izao satria ho entina eo anivon’ny fihaonana an-tampon’ny Sadc tsy ho ela ny tatitry ny fakan-kevitra nataony teto.
← Fanodinana fako any Toliara : hamokatra zezika 4.000 t isan-taona (NewsMada)
Filohan’ny fitsarana ambony Toamasina : « Ho sarotra ny fametrahana ny tany tan-dalàna » (NewsMada) →